Tomato iche | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Tomato iche
Ịmụta ịgha mkpụrụ osisi na mgbụsị akwụkwọ: ndụmọdụ bara uru
Mkpụrụ vaịn dị ezigbo uru n'ihi na ha nwere vitamin, mineral, bekee antioxidant. Ekwula okwu, na ihe uto ha. Mkpụrụ vaịn ga-agbanye mgbọrọgwụ n'ala ọ bụla, ọ dịghị achọ nlekọta pụrụ iche. Ọ bụ ya mere ọ na-atọ ụtọ nke na-eto eto. Ma, na omume, enwere ọtụtụ ajụjụ gbasara ilekọta ihe ọkụkụ a, ihe kachasịsịsị bụ mkpụrụ osisi vine, rụrụ n'oge ọdịda.
Ụdị tomato kachasị mma: nkọwa, uru, ọghọm
Ndị na-akpa nri na-amalite na-enwe mmasị na ajụjụ nke ihe a ga-akụ iji nweta ezigbo owuwe ihe ubi. Nke a bụ maka ndị chọrọ ịga nke ọma na-eto eto tomato. A sị ka e kwuwe, e nwere ụdị tomato dịgasị iche iche, ha niile dị iche iche na uto, agba, nha na àgwà ndị ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị setịpụrụ onwe gị ihe mgbaru ọsọ iji nweta tomato dị ụtọ, mgbe ahụ, ozi a bụ maka gị.
Esi lekọta ya
O siri ike ịhọrọ ụdị tomato dị iche iche n'etiti ọtụtụ ụdị na iche iche. Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ ịkụnye ha na saịtị ha nke ọma na oge a na-anwale. Otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu bụ tomato nke Liana. Peculiarities nke Lyana dịgasị iche iche Ọ bụ mmalite ripening na n'otu oge elu-ekwenye iche iche.
Zute Tomato Pink Honey
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi, na ọbụna ndị na-elekọta ubi, na-agbalịsi ike inweta ihe ubi ka mma, nke na-eme ka ha nwee ike ịnwale ụfọdụ akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi na tomato. N'oge a, anyị ejiriwo iwepụta ọtụtụ ihe ndị bara uru, gụnyere tomato Honey Honey.
Kedu ka esi eto tomato "De Barao" n'ubi gi
N'oge a, tomato bụ ngwaahịa nkịtị na tebụl ọ bụla. Ndị bi na Summer na ndị na-elekọta ubi na-ele ya anya dị ka iwu iji gbasaa ihe oriri a n'elu akwa ha. N'ụwa, e nwere ụdị tomato dị iche iche, nke ọ bụla n'ime ha dị iche iche ma dị mma n'ụzọ nke ya. Ma n'etiti ndị a nile dị iche iche tomato "De Barao" kwesịrị nlebara anya pụrụ iche.
Kedu ka esi eto "Prince Black", na-akụ ma na-elekọta tomato "nwa"
A maara "Black Prince" ahụ maka agba agba ọchịchịrị nke mkpụrụ ya. Ihe ndi ozo bu uzo di iche iche di iche iche di iche iche. "Onye nchịkwa ojii" wepụrụ ndị China si China. Ejiri usoro ihe omumu mee ihe n'ubi ya, mana ihe di iche iche adighi ka GMO, ya mere, ndi nwere ezi nri nwere ike iji tomato di iche iche na-enweghi egwu.
Peculiarities nke na-eto eto tomato "Dubrava" na dacha
N'etiti ụdị tomato dị iche iche n'ahịa taa, ndị na-elekọta ubi na-anwa ịhọrọ ndị na-adịghị mma mgbe ha toro n'èzí, anaghị achọ garter na pasynkovaniya. Ihe ndị a nile nwere ọkwa nke tomato Oak. Tomato Dubrava: nkọwa dịgasị iche Nke a na tomato nwere oke mkpokọta - ọ na-eto eto karịa 70 cm n'ịdị elu.
Atụmatụ nke na-eto eto tomato tomatoe, na-akụ ma na-elekọta letus tomato
Tomato bụ ihe oriri na-ewu ewu n'etiti ubi a kụrụ. Akụkụ ya dị nnọọ ukwuu: nke ọhụrụ, nke abụọ na nke mbụ, canning. Ihe isi ike nke ịkụ ihe, dị ka ọnọdụ ihu igwe, na-akpali ndị ịzụlite ịzụlite ọhụrụ, na-eguzogide ọgwụ dị iche iche na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche, yana ọrịa dịgasị iche iche.
Atụmatụ nke na-eto eto Mmanụ aṅụ na-adaba n'ogige, na-akụ ma na-elekọta odo odo
Mkpụrụ osisi dịgasị iche iche na mkpụrụ osisi nke akwukwo nri ihe ubi emeela ihe isi ike nye ndi na-acho igwu n'ime ubi ha. O siri ike ịhọrọ, na-abanye n'ime abyss nke amụma ahịa. Ikekwe ọdịdị a na-ahụkebe ga-abụ ahịhịa nke na-adabere na akpịrịkpa na tomato Honey na-adabere ihu ọma ya.
Kedu ka esi eto tomato "Pertsevidny", karịsịa na-akụ ma na-elekọta osisi
Tomato - otu n'ime osisi a kacha ewu ewu. Ha nwere ike ịchọta ha n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ubi ọ bụla. N'oge enwere ihe oriri a, ọtụtụ ụdị dị iche iche a na-eri bred nwere àgwà dịgasị iche ma dabara n'ọnọdụ dịgasị iche. Tomato "Ose": nkọwa na iche Tomato "Ose" na-ezo aka na ndị dị iche iche nke nkọwa ya na ndị ọzọ na akwụkwọ nri.
Ntugharị Tomato: nkọwa dịgasị iche iche, mkpụrụ, kụrụ na nlekọta
Tomato bụ ezigbo ihe ngwọta nye ndị na-elekọta ubi. Ọ dị nnọọ mfe ịkụlite ha na nkata gị, ọ dịkwa ọtụtụ uru site n'aka ha. Na mgbakwunye na uru ya bara uru, tomato nwere ọgaranya na vitamin na nri, ha nwere ike ichota efere ọ bụla. Ka anyị wee rie nri a magburu onwe ya, ndị na-azụ atụrụ wepụtara ọtụtụ ụdị dị iche iche, na otu n'ime ha bụ tomato dị iche iche, bụ nke na-arịwanye elu na akwa.
Tomato Marina Grove: akuku, nlekọta, uru na ọghọm
Ndị na-akọ ubi na ndị na-elekọta ubi na-achọ nnọọ ihe ubi ha ma na-enwekarị obi ụtọ n'ebe ha nọ. Ọbụna ndị ọkachamara ahụmahụ anaghị enwe ike ijikọta mkpụrụ osisi ndị nwere nnukwu ihe ubi. Nke a na-emetụta tomato. Ọtụtụ tomato na-atọ ụtọ mgbe a na-eji ya eme ihe ọhụụ, mana ọ bụ na ọ dịghị mma maka ichebe, na ntụgharị.
Tomato "Kate": nkọwa, mkpụrụ, atụmatụ nke ịkụ na nlekọta
Ụdị tomato dị iche iche bụ "Kate" gosipụtara onwe ya n'etiti tomato dị iche iche. Na àgwà ọma ya, dịka iguzogide ọrịa na ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma, ụdị tomato "Katya" dị iche iche na-akwụ ụgwọ ọtụtụ nde ndị bi n'oge okpomọkụ. Ọbụna ndị na-eto eto na-enweghị ike ịkụ mkpụrụ dị otú a, n'ihi na ọ dịghị achọ nlekọta ọ bụla.
Kedu ka esi eto "Utu akwukwo nri", na-akụ ma na-elekọta tomato n'ime ogige
Di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche bu akwukwo di iche iche. Ọ na-emeri ndị ọrụ ubi na agba ya na-adọrọ mmasị, uto na mkpụrụ. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi eto tomato "Akụkụ Ntụtụ", nkọwa nke ụdị dịgasị iche na nlekọta. "Akuku Nri": nkọwa na njirimara nke ụdị tomato dị iche iche "Ụka Nri" bụ ihe dị iche iche na-achọpụta, nchịkọta nke anaghị achọ nchịkwa, ya mere, ọ dịghị ihe nkedo chọrọ.
Mikado Pink: Otu esi eto eto tomato
Nri, ọdịdị na arụpụta ihe nke mkpụrụ tomato dị mkpirikpi "Mikado Pink" nwetara nyocha dị mma maka ndị na-azụ ahịa. Maka afọ 2 nke ịdị adị, ụdị ebube a na-asọpụrụ nke atụmatụ Europe ma nweta aha a na-akpọghị "alaeze". Ka anyi buru ndi ozo na ihe di iche iche nke tomato "Mikado pink" na njirimara na nlekọta.
Tomato "Bobcat": nkọwa nke dịgasị iche iche na iwu nke ịkụ na ilekọta
Onye ọ bụla na-elekọta ubi ga-achọ inwe tomato na ala ahụ nke ga-atọ ụtọ na mkpụrụ. Otu n'ime ihe ndị a dị iche iche raara nye nyochaa nke taa. Tomato "Bobcat": nkọwa na njirimara Ka anyị lee ihe nke a dị iche iche na ihe ị kwesịrị ịṅa ntị na ya mgbe ọ tozuru. Nkọwa nke ohia Osisi ahụ na-ezo aka n'ọtụtụ nha nke ụdị.
Ihe omume na atụmatụ nke na-eto eto tomato "Red Guard"
Taa, e nwere nnukwu tomato dị iche iche. Nnukwu ewu ewu bụ "Red Guard" dị iche iche, nke a ga-atụle n'isiokwu a. Tomato "Red Guard": akụkọ banyere ozuzu a ngwakọ N'ọtụtụ ebe ugwu, ebe oge okpomọkụ dị mkpụmkpụ, ruo n'oge na-adịbeghị anya enwere nsogbu na-eto tomato.
Peculiarities nke na-eto eto tomato "Sugar Bison" ke greenhouses
Tomato "Sugar Bison" dị iche na nke ndị ọzọ "ndị ikwu" ya, ọ natakwara ọtụtụ nyocha dị mma site na ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. Taa, ị ga-amụta nkọwa na ngwa nke dị iche iche, yana agrotechnology nke na-eto eto akwụkwọ nri na greenhouses. Akụkọ banyere mwepụ tomato "Sugar bison" Ụdị tomato "Sugar Bison" bred ndị na-elekọta anụ ụlọ na Russia site na ozuzu.
Characteristic iche tomato "Tretyakov"
Mkpụrụ mkpụrụ osisi nke tomato dịgasị iche iche "Tretyakovsky f1" sitere na onye na-emepụta ihe mkpụrụ osisi "Ural summer resident" na-eme nke ọma n'etiti ndị ọzọ adọ ụdị ụfọdụ ndị pụtara. Na nyochaa, ndị na-eto eto na-eri nri dị ụtọ na ọdịdị tomato, nakwa dị ka mkpụrụ ha dị elu. Ka anyi nyochaa nkowa ihe omuma nke nkowa na uzo nke ugbo nightshade.
Kedu ka esi eto tomato "Yamal": iwu nke ịgha ihe na ilekọta
N'etiti ụdị tomato ndị ji obi ụtọ na-etolite n'ọhịa, "Yamal" na-ewe otu n'ime ọnọdụ mbụ. Ọ na-enwe obi ụtọ ịzụlite ma ndị na-amalite ma na-elekọta ubi. Na n'aka onye ọ bụla, ọ na-eme nke ọma, na-enye nnukwu mkpụrụ. Ị ma? Tomato bịara latitudes anyị site na oké ọhịa nke South America.
Anyị na-amata atụmatụ nke tomato "Siberia n'oge"
Ọ bụghị ụdị tomato ọ bụla nwere ike itolite ma mịa mkpụrụ nke ọma na oke oyi, ọzọ, n'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, osisi chọrọ nlekọta pụrụ iche, ha aghaghị inwe àgwà pụrụ iche. Otu n'ime osisi ndị a - tomato "Siberia n'oge." Akụkọ ihe mere eme nke tomato na - eto "Siberia n'oge" N'ebe a na - emepụta ihe ndị dị na Siberia, bụ nke na - ahọrọ ma chọpụta ụdị osisi dị iche iche, na 1959, site na ịgafe, e nwetara ụdị tomato dị iche iche na - eguzogide ọgwụ - "Siberia n'oge".
Kedu ihe bụ ụbara bara uru maka ahụ mmadụ (ọgwụ ọgwụ nke igwe na ngwa ya)
Gladiolus n'ime igbe: na-eto ma na-elekọta
Nkụzi dị mma ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ maka ọnwa ọhụụ? Ntuzi nri nri ulo
Kedu ka esi gbanye ọkụkọ iji wepụ nsen
"Moonstone" na windo window gị - pachyphytum
Klaị Kuril: ebe ọ na-etolite, ihe dị mma, ihe ọ na-enyere aka, otu esi etinye ya n'ọrụ
Bakchar ibu: esi enweta nnukwu tomato
Ụdị mkpụrụ osisi vaịn na-atọ ụtọ dịgasị iche iche Bulgaria